ပွင့်တဲ့ ပန်းတိုင်း.လန်းစေချင်(အမျိုးသားများမဖတ်ရ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » ပွင့်တဲ့ ပန်းတိုင်း.လန်းစေချင်(အမျိုးသားများမဖတ်ရ)
Posted by ရွာသူလေးချမ်းချမ်း(ရင်တွင်းဖြစ်) on Sep 19, 2010 in Opinions & Discussion, Relationships & Family | 25 comments
အခု ချမ်းချမ်းပြောမဲ့ အကြောင်းအရာလေးက အတင်းအဖျင်း အနေနဲ့့တစ်ဖက်မိန်းမသားကို…နှိမ်ချင်လို့အထင်သေးလို့ မဟုတ်ဘူးနော်..
မျှဝေတာပါ..ပတ်ဝန်းကျင်က ပေးတဲ့ သင်ခန်းစာပေါ့…
အားငယ်သွားတာ၊စိုးတထိတ်ထိတ်ဖြစ်နေရတာတွေ …ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယုံကြည်မှုတွေ..နည်းပြီး..နောင်တတရားနဲ့ ရင်မှာပူလောင်နေတာဘ၀ပျက်မတက်ပါဘဲ၊
အပျိုတွေကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတာ.ချစ်သူက ပစ်သွားလို့ အဆိပ်သောက်သေတာ..စုံနေတာပဲ…ချစ်ကြပြီဆိုရင်….ယောင်္ကျားလေးတော်တော်များများ
ဘာလို့များ လိုအပ်တာထက် အခွင့်အရေးယူကြတာလဲ…မိန်းကလေးတော်တော်များများကရော..ဘာလို့့များ..မငြင်းဆန်ရတာလဲ.. နစ်နာစရာရှိရင်ဘယ်သူကပိုနစ်နာမလဲ..
အခွင့်အရေးပိုယူတဲ့ ချစ်သူအပေါ်..ကိုဘယ်လိုမြင်ကြလဲ..သူကငါ့ကိုသိပ်ချစ်လို့ .. အခွင့်အရေးတောင်းတာများးထင်နေလားတော့မသိဘူး… အချစ်နဲ့ ရမ္မက် ကတခြားဆီပါ..
အချစ်နဲ့ ဘ၀…ချစ်တဲ့ သူနဲ့ လက်ထပ်မဲ့ သူ..တစ်ထပ်တည်းကျချင်မှကျမှာနော်..
…***(Every Men Has His Price)***တဲ့ …သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ Profle ထဲမှာရေးထားတာတွေ့ မိတော့..ချမ်းချမ်းစဥင်္းစားမိသွားတာက..ယောကျာ်းလေးတိုင်းသူ့ တန်ဖိုးနဲသူရှိရင်. .စောင်းစည်းထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုတာလဲ.ရှိနေရပါမယ်..
သူ့ ချစ်သူကိုယုံကြည်လို့ .ချစ်သူငြိုငြင်သွားမှာကြောက်လို့ ..အလိုလိုက်မိတာပဲဖြစ်ပါလိမ့််မယ်…(ဒါက အညှာလွယ်ပြီး..အားနာတတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေ..ကိုပြောာတာနော်..)
၀ါသနာပါရင်လဲ.လွယ်လွယ်နဲ့ ရမဲ့ နေရာကိုသွားလိုက်ပေါ့…
လောကမှာအရေးကြီးဆုံးက..ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ပါ.ငါသာဆိုရင်…ဆိုတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေး.ကို..လက်ခံထားရင်တော့..အမှားနည်းမယ်လို ထင်တာပဲ..
တစ်ရံုးလုံးက ချစ်ကြတယ်..တစ်နေ့ သူမတို့ ရုံးထဲကို.ခန့် ခန့့်ချောချောဝန်ထမ်းအသစ်ငင်လာတော့အလုပ်အကြောင်းသင်ရင်းနဲ့ ..ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြပါတယ်. .ကောင်လေးကသူမကိုအရမ်းလဲဂရုစိုက်တယ်..ဒါပေမယ့်.. သ၀န်တော့.တိုတတ်တယ်..ရုံးထဲက တခြားယောကျာ်းလေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ စကားပြောတာ
တစ်နေ့ သင်္ကြန်ကျတောကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေးလျှောက်လည်..ရင်း…ကောင်လေးရဲ့ သူငယ်ချင်းအိမ်မှာ..အချမ်းပြေ.. ၀င်နားတာ့ကောင်လေးကနည်းနည်းမူးနေပါတယ်..
ကောင်မလေးကိုလဲ.အတင်းပဲ.အခွင့်အရေးတွေတောင်းတော့.ကောင်မလေးက ရှိသမျှခွန်အားလေးနဲ့ ရုန်းကန်ပြီးငြင်းဆန်ခဲ့ပေမယ်..တစ်ဖက်ကလဲ.မူးပြီးလူစိတ်ပျောက်နေတော့. .ယောကျာင်္းလေးအားနဲ့ မိန်းကလေး..အားချင်းမမျှတော့..သူမရဲ့ အပျိုစင်ဘ၀ကို.. မူးရူးနေတဲ့ ချစ်သူလက်ထဲမှာ.ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်..
.ကောင်လေးလဲစိတ်မပါ့တပါနဲ့ ..လာတောင်းပြီးအကျဉ်းရုံးလက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်..လက်ထပ်ပြီးတဲ့ နေ့ ကစပြီး.ကောင်လေးရဲ့ အချိုးတွေလုံးဝပြောင်းလဲသွားတော့တာပဲ.. သူမကိုအရေးတယူလဲမရှိဘူး.. အိမ်ပြန်လာချင်တဲ့ ကျမှပြန်လာတယ်.. တစ်ချိန်တုန်းက.သိပ်ချစ်ပါတယ်.. သိပ်ကိုကြင်နာပြီးယုယတတ်တဲ့ သူမရဲ့ ချစ်သူဆိုတာ.ယုံတောင်မယုံနိုင်ပါဘူး..
သူနာကျင်အောင်..တစ်ခုခုမတုန့် ပြန်ဘဲ..သူ့ ဆန္ဒကို..မျက်ရည်များနဲ့ ဖြည့်ဆည်းခဲ့ရတာ..သူမဘဲသိတယ်…
အဲ့ဒီလိုနဲ့ ..အထီးကျန်ဆန်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးနွံထဲမှာ…တစ်သက်လုံး…နောင်တတွေနဲ့ ..
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀..ဟာ ပန်းလေးတစ်ပွင့်လိုပါဘဲ…
ပါ၊..ချစ်သူ နဲ့ လက်ထပ်တဲ့ သူ…တစ်ထပ် ထဲကျချင်မှကျမှာပါ…အသိလေးနဲ့ ဆင်ခြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ..
ကိုယ့် ဘ၀ ကို.ကိုယ်တိုင် ကတန်ဖိုးထားမှ..သူများက ကိုယ့်ကိုတန်ဖိုးးထားမှာပါ…
အားလဲမနာပါနဲ့ ..ကိုယ့်ကို ကိုယ်..တန်ဖိုးထားမှ..သူများလဲ.ကိုယ့်ကို..တန်ဖိုးထားမှာပါ..သူများကဲ့ ရဲ့ တာထက်ကိုယ့်ကိုယ်ကို..မကဲ့ ရဲ့ မိပါစေနဲ့ .. တစ်နေ့ မှာ.မြင့်မြတ်တဲ့ မိခင်ဘ၀ရောက်မယ့်..မိန်းကလေးတိုင်း.ဟာ.. အရွယ်ရောက်တဲ့ ကိုယ့်သမီးတွေကို.ဆိုဆုံးမနိုင်ဖို့ အတွက်
(ပွင့် တဲ့ ..ပန်းတိုင်း..လန်းကြပါစေ…..).
ချမ်းချမ်းဘာဖြစ်လို့ ..(အမျိုးသားများမဖတ်ရ)..လို့ ရေးရတာလဲဆိုတော.့..
ချမ်းချမ်းက စာရေးဆရာမ မဟုတ်ပါဘူး..
အခုရေးတဲ့ ပိုစ့်က..ဘ၀ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ အမျိုးကောင်းသမီးတွေ..ညီမလေးတွေ..ဆင်ခြင်နိုင်အောင်လို့ .မိန်းကလေးဘက်က
အရှေ့ ကလူတွေမှားခဲ့ဘူးတာတွေကို.သိထားရင်.အဲ့ဒီလို အဖြစ်မျိုး..တွေ..ကို..ရှောင်နိုင်ဖို့ အတွက်ပါ..
မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ .ယောကျာင်္းလေးတွေကို.လွယ်လွယ်နဲ့ မယုံသင့်တဲ့အကြောင်း..ရေးမိတာလေးနဲ့ တင်..
သဘောထားသေးသိမ်တဲ့ သူအဖြစ်..အထင်လွဲခံခဲ့ရလို့ ပါ..
တကယ်တော့မိန်းကလေးဆိုတာ..ယောင်္ကျား.လေးတွေနဲ့ ..အရာရာယှဉ်လို့ မရပါဘူး..အစစအရာရာဆင်ခြင်နိုင်ပါမှ..တော်ရာကျမှာပါ..
.ချမ်းချမ်းရင်ထဲမှာ.ရှိတာလေးသိတာလေးကို..အခြေခံပြီးဝေဖန်ဆန်းစစ်ထားတာမို သူငယ်ချင်းတွေ လက်ခံနိုင်တယ်..လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာ..မသိပါဘူး
ဖတ်လို့ ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့Comment ပေးတာထက်..ကိုယ့်ရဲ့ အယူအဆ..သိမြင်သမျှတွေကို..ချရေးစေချင်ပါတယ်
အချင်းချင်းဗဟုသုတွေ မျှဝေခံစားတဲ့ ..သဘောလေးပါ..
ဝေဖန်မှုရှိမှ..တိုးတက်မယ်….ဆိုတဲ့ စကားပုံလေးအတိုင်း..အားလုံးပဲ…ဒီပိုစ့်လေးကို ဝေဖန်ဆန်းစစ်ပေးကြပါနော်..
ဝေဖန်တာ နဲ့ ကဲ့ရဲ့ တာမတူပါဘူးနော်..
ကဲ့ ရဲ့ တာက အပြစ်မြင်တာ.ပါ..
း အားလုံး….ချိုမြန်တဲ့ ဘ၀..ပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ 
အခုလို အသိပေးတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ခုခေတ်မှာ ဒါမျိုးတွေ အရမ်းများနေပါပြီ။ ယောက်ျားလေးတွေကလည်း မိန်းကလေးတွေကို လွယ်လွယ်မယုံကြည်နိုင်တော့ သစ္စာမထားနိုင်တာဖြစ်မယ်။ ဒါတွေဟာ အပြန်အလှန်ဖြစ်ရတာပါ။ နှစ်ဖက်လုံး အဆင်ပြေဖို့ အဓိကပါပဲ။
လက်ခုပ်ဆိုတာ တဖက်တည်း တီးလို့ မမြည်ပါဘူး….. ဘယ်သူကြောင့် လို့ ပြောလို့ မရပါဘူး မိန်းကလေး ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ယောင်္ကျားလေး ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဓိက ကတော့ စိတ်ထိန်းနိုင် ဖို့ပါပဲ….
နောက်ပိုင်းကျတော့ လူငယ်တွေအနေနဲ့ သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာတောင်ဖက်ရှင်လိုဖြစ်နေသလားမပြောတက်ဘူး
စိတ်ဓါတ်မြင့်မားကြပြီး အလွဲတွေမတွေးမိပဲ မှန်မှန်ကန်ကန် စဉ်းစားမိရင်ကောင်းမှာပဲ
ရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကကောင်းပါတယ် … အခုခေတ်က လူငယ်တွေတော်တော်များများက
ဒါကို ခေတ်ရေစီးကြောင်းတစ်ခုလိုမြင်လာကြတယ် .. ချမ်းချမ်းပြောသလို နောင်တရပြီးနေတဲ့ သူတွေရှိသလို
တစ်ချို့ကတော့ တစ်ယောက်နဲ့ပြတ်လဲ အေးဆေးပဲ နောက်တစ်ယောက်ပြတ်လဲ ဂရုမစိုက်ပါဘူးဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးရှိတက်ကြတယ် ..
ဒါကလဲ ကိုယ်ကိုတိုင်က ကိုယ့်ဘဝကို တန်ဖိုထားဖို့ထိန်းသိမ်းဖို့တက်ဖို့ လိုအပ်မယ်ထင်ပါတယ် ..
good lesson for girl. Thanks for your post Chan Chan.Next time you Can write better than this post.
ချမ်းချမ်းရေးထားတာလေးတွေကို သဘောကျပါတယ် မိန်းကလေးတွေ အားလုံး သိထားသင့်ရုံမက ရှောင်ပါရှောင်ရမယ့် အကြောင်းအရာတွေပါ
ခုခေတ်မိန်းကလေးတော်တော်များများက(အားလုံးကိုမဆိုလိုပါ) ကိုယ့်ကိုကိုယ် တန်ဖိုးထားတဲ့သူ နဲလာပြီလို့ထင်ပါတယ်
Chan Chan wrote is good and give many knowledge for girl. This post should also read boy. So, can know about their wrong things. And can feel something thier mind.Thanks for apply this post.
ရေးသားထားတာ အရမ်းကောင်းပါတယ် … ယောက်ျားလေးတွေဖတ်မိခဲ့ရင်လည်း တကယ်ကို ကိုယ်ချင်းစာ နားလည် ပေးနိုင်တဲ့စိတ်သူ တွေက ဒါကို အပြစ်တင်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး … ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ …. ယောက်ျားလေးတွေ အနေနဲ့ မှားခဲ့ပြီးပြီဆိုရင်လည်း …ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူရဲတဲ့စိတ်ကလေးတော့ ရှိနေသင့်တယ် ပြန်ပြင်လို့မရတော့မယ့်အတူတူ တာဝန်ယူရဲတဲ့စိတ်ရှိမှ တာဝန်ယူရဲနိုင်မှ ယောက်ျားကောင်းပီသပါလိမ့်မယ် …… မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့လည်း မဖြစ်ခင်ကတည်းက ကြိုတင်ရှောင်နိုင်ခဲ့ ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲပေါ့ …..
ရုပ်ဝတ္ထုတွေတိုတက်သလောက် ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တွေ ကောင်းသလောက် ကမ္ဘာ့ရွာကြီးဖြစ်လာနေပါပြီ
ဒီခေတ် ၁၂ နှစ်ကလေးတယောက်ရဲ့ sex အသိက လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၃၀ က အသက်၂၀ ကျော်ထက်ကိုပိုပါတယ်
မြန်မာမှာက အသိတွေသာတိုးလာတယ် မိဘနဲ့သားသမီး ဆရာနဲ့တပည့် ဒီsex ကိစ္စကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း
ပြောရမှာအခုထိရွံ့နေတုန်းပါဘဲ အထူးသဖြင့်မိဘနဲ့သမီး ဆရာနဲ့ကျောင်းသူ ပြောဖို့ ပိုပြီး ၀န်လေးပါတယ်
ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ပြောသလို တံခါးဖွင့်လိုက်ရင်အလင်းရောင်ရမယ် လေကောင်းလေသန့်ရမယ်
တပြိုင်နက်တည်း ခြင်လဲဝင်လာမယ် ယဉ်ကောင်လဲဝင်လာမယ်
ခြင်တွေယဉ်တွေဝင်မှာ ဆိုးလို့ဆိုပြီး တံခါးမဖွင့်လို့လဲမဖြစ်ဘူး
ဖွင့်ထားတဲ့တံခါးကနေ ကောင်းတဲ့အသိလေးတွေအမြင်လေးတွေယူနိုင်ဖို့ မိဘနဲ့ဆရာတွေက၀ိုင်းဝန်းသွန်သင်ကြဖို့
လမ်းညွှန်ပေးဖို့ လိုနေပါပြီ၊ လူငယ်တွေကလဲစဉ်းစားစဉ်ချင်ဖို့သင့်ပါပြီ။
မိန်းကလေးတွေ “trust” ဆိုတဲ့movie ကြည့်ပါလား
သေချာတာ တခုကတော့ ချမ်းချမ်းဟာ သဘာဝကို လွန်ဆန်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို လက်ခံထားတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်လို့ 
ထင်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာတော်တော်များများဟာ လက်တွေ့ မဆန်ပါဘူး။
ဒီ့အပြင်ကို ဒီလိုစာမျိုးဟာ အသိဥာဏ် ဖွင့်ဖြိုးသင့်တဲ့ လူတွေကို ထိုင်းမှိုင်းသွားအောင် ကြောက်လန့် စရာ အဖြစ်မျိုး
အနေနဲ့ လက်ခံသွားအောင် ရေးသားထားတဲ့ အပျိုစင် ဂုဏ်ယူရေး လမ်းဟောင်းကို လိုက်နေပါတယ်။
ကျေးဇူးပြုပြီး ကိုယ့်ကို မွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့ အမေကို အားနာပါ။
ဘာလို့များ လိုအပ်တာထက် အခွင့်အရေးယူကြတာလဲ…မိန်းကလေးတော်တော်များများကရော..ဘာလို့့များ..မငြင်းဆန်ရတာလဲ..နစ်နာစရာရှိရင်ဘယ်သူကပိုနစ်နာမလဲ..”
လိုအပ်တာထက် အခွင့်အရေးယူတယ်ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုတာပါလဲ။ သနားလို့နို့ ပေးကိုင်ရင် ငယ်ပါကို ရန်ရှာချင်တယ်ဆိုတဲ့
စကားကိုကြားဖူးမှာပါ။ ခန္ဒာ ဗေဒ အရဆို လိင်စိတ်ရဲ့လှုံ့ ဆော်မှုကို လွန်ဆန်တာဟာ အလွန် ရူးမိုက်တဲ့ အပြုအမူပါ။
လွန်ဆန်နိုင်တယ်လို့ ပြောသူတွေဟာ လိင်လှုံ့ ဆော်မှု အခွင့် အရေးကို မရရှိတဲ့သူတွေပါ။ ချစ်တယ်ကြိုက်တယ် ဘယ်လိုပြောပြော
လိင်မဆက်ဆံတဲ့ လင်မယားဆိုတာ မရှိပါဘူး။ အိမ်ထောင်မကျခင် လိင်ဆက်ဆံဖို့ ကြိုးစားတဲ့ အပြုအမူဟာ အခုမှ မဟုတ်ပါဘူး
ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့အဘေးအဘိုးအဖေဦးလေးအကိုတွေ ငယ်ရွယ်စဉ်ကတဲကပါ။ ကျုပ်အဖေဟာ သေချာပေါက်ကို ကျုပ်အမေ
နဲ့ ချစ်သူဖြစ်စဉ် အချိန်က လိင်ဆက်ဆံဖို့ ကြိုးစားခဲ့ဖူးမှာပါ။ ကျုပ် အမေကလဲ လိင်စိတ်ရဲ့ လှုံ့ ဆော်မူကို ပင်ပန်းကြီးစွာနဲ့ 
လွဲမှားယဉ်ကျေးမှုရဲ့ အရိပ်ကြောင့် ငြင်းပယ်ခဲ့ဖူးမှာပါ။
ခင်ဗျားပြောသလို …နစ်နာစရာရှိရင် ဘယ်သူက နစ်နာမလဲဆိုတော့………ယောကျာင်္းလေးနဲ့အတူနေရင် ဗိုက်ကြီးတတ်တယ်
လို့သွန်သင်ခဲ့တဲ့ အမေတွေက ပိုနစ်နာပါတယ်။ အမေတွေရဲ့ညံ့ဖျင်းလွဲမှားတဲ့ သွန်သင်ဆုံးမမှုတွေကြောင့် သမီးတွေ ဒုက္ခ
ရောက်ရပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေ ဒီထက်ပိုပြီး သိအောင်လုပ်ရပါမယ်။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့်ရတဲ့ သာယာမှုနဲ့လူအဖြစ်
ရပ်တည်နိုင်မှုမှာ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေတဲ့ ဆန့် ကျင်ဖက် လိင်ကို ရွေးချယ်စေနိုင်မှုကို ပြတ်သားစွာ ခွဲခြားပေးနိုင်ရပါမယ်။
ကိုယ်လိုရာ ဆွဲပြောကြေးဆို အဖေက အမေ့ကို လက်မထပ်ခင်မှာ လိင်ဆက်ဆံခွင့်ရခဲ့ရင် မယားမှတ်မှတ် သားမှတ်မှတ်ပေါင်းဖြစ်ချင်မှ ပေါင်းပါလိမ့်မယ်။ လိင်ဆက်ဆံမှုပညာပေးဆိုတာကို လိင်ဆက်ဆံမှုအပျော်ကျူးခြင်းနဲ့ မရောထွေးစေလိုပါ။ မျိုးရိုးဗီဇ ဒါမှမဟုတ် လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုရင် ဂျူနီယာဆယ်ကျော်သက်တွေကို ဆက်ဆံလိုစိတ်ရှိတာ၊ လိင်တူခြင်း ဆက်ဆံတာ၊ တိရစ္ဆာန်နဲ့ဆက်ဆံတာ၊ လင်ရှိမယား၊ မယားရှိလင်နဲ့ ဆက်ဆံတော့လည်း ဘာဖြစ်သလဲ၊ ကိစ္စကိုယ်ပြီး ကိုယ်လမ်းကိုယ် သွားရုံပဲပေါ့။ ဒါဆို ဆွေမျိုးသားချင်းထဲကနဲ့ လိင်ဆက်ဆံတော့ကော ကိုယ့်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်လို့ ပြောရင်ရမလား။ စည်းကမ်းဘောင်ဆိုတာ ဘာသာတရားလိုပဲ တလွဲသုံးကြရင်းနဲ့ အပျက်ဖက်ကိုရောက်သွားတာ။
ငါ.ရည်းစားထားရင် အတူတူနေလို.ရခဲ.မယ်ဆိုရင် နေလိုက်မယ် ပြီးရင်မယူဘူးတဲ. ဘာ.လို.လည်းဆိုတော.
မှန်တယ် ရွှေဘိုသားရေ။ ဝမရှိဘဲ ဝိမလုပ်တာကောင်းတယ်။ သူ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့သူ အထာကျနေတာကိုကြည့်ပြီး ငါလည်းဖြစ်မှာပဲမထင်နဲ့။ ဖြစ်တော့ဖြစ်မယ် xx
မြန်မာမ တချို့တွေ့နေရတယ်၊ အမေရိကန်မှုပြုတယ်ဆိုပြီး စိတ်ဆန္ဒနောက်ကို လိုက်နေကြတာ။ သိပ်တော့ဝမ်းမနည်းပါဘူး၊ ဒီပုတ်ထဲက ဒီပဲတွေ? မြန်မာပြည်မှာကထဲက အလေ့အကျင့် ရခဲ့ကြသူတွေများတယ်။ ဒီရောက်တော့ ဆက်လှုပ်ရှားရတာပေါ့။ အပြောကတော့ လွတ်လပ်မှုတဲ့။ ယောက်ျားလေး အများစုကတော့ ရွှေဘိုသားပြောသလို ရတုံးတွယ်မဲ့သူချည်ပါပဲ။ ဦးကြောင်လည်းပါသပေါ့.. သူတို့တွေကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးနေကြတယ်၊ ငါတော့ အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဟုတ်နေပြီလို့၊ ကကလို့ သဘောထားနေတာကိုတော့ မသိဘူး၊ မသိဆို ဘယ်သူမှလည်း အမုန်းခံ မပြောကြဘူးလေ။ ဦးကြောင်လည်း ဒါမျိုးတွေ့ရင် လုပ်သာလုပ် ကိုယ့်လုပ်မှကိုယ်စား ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံဆိုပြီး မြောက်ပေးလိုက်တာပဲ…
တခုတော့ရှိတယ် မြန်မာပြည်ကလာတဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီးသား မျိုးဆက်တွေကို ပြောတာနော်။ ဒီမှာမွေး ဒါမှမဟုတ် ဒီမှာကြီးပြင်းသူ မျိုးဆက်တွေအတွက်ကတော့ သူ့ယဉ်ကျေးမှု၊ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အံကိုက်နေပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်က သူတို့နဲ့မရောနိုင်ရင်၊ သူတို့လို မနေနိုင်ရင်၊ ကိုယ်လိုသူလို ကြီးမှရောက်လာသူတွေနဲ့ ရောနှောနေမယ်ဆိုရင်တော့ ဖင်မနိုင်ဘဲ ပဲကြီးဟင်း မသောက်တာကောင်းတယ်။ ကြိုက်ကြိုက် မကြိုက်ကြိုက် တခုတော့ ပြောလိုက်မယ်.. မိန်းမတို့ရဲ့တန်ဖိုးသည် အဆင်းတဲ့.. အဲဒီအဆင်းက အသက်အရွယ်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်။ စောင့်စည်းနိုင်မှုနဲ့လည်းဆိုင်တယ်။ အဲဒါ မြန်မာပြည်လို တိုင်းပြည်မှမဟုတ် အနောက်နိုငံတွေမှာလဲ ဒီလိုပဲ၊ အနဲအများသာ ကွာမယ်။ နောင်ကြမှ ဟိုမရောက်ဒီမရောက်နဲ့…အင်း..ပြောတော့ပါဘူး (ပြောလဲပြောပြီးသွားပြီ :D) အကုသိုလ်များတယ်…
ခင်ဗျား သူငယ်ချင်းဟာ အတော်ကို အသိဥာဏ် နည်းပါးတဲ့ သတ္တ၀ါလို့ ထင်ပါတယ်။
“…..ငါ.ရည်းစားထားရင် အတူတူနေလို.ရခဲ.မယ်ဆိုရင် နေလိုက်မယ် ပြီးရင်မယူဘူးတဲ. ဘာ.လို.လည်းဆိုတော.
ဘ၀ဆိုတာ အလွန် ခက်ခဲနက်နဲပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့အဲဒီပေါင်ကြားထဲက မျိုးပွား အင်္ဂါတဖြစ်တလဲ ကျင်ငယ်
စွန့် ပစ်တဲ့ဟာ ကို ဘ၀ လို့ သတ်မှတ်နေကြတာလဲ။
“ငါ.ရည်းစားထားရင် အတူတူနေလို.ရခဲ.မယ်ဆိုရင် နေလိုက်မယ် ပြီးရင်မယူဘူးတဲ. ဘာ.လို.လည်းဆိုတော.သူ.ဘ၀သူတောင်တန်ဖိုးမထားတာ ငါလည်းတန်ဖိုးမထားနိုင်ပါဘူးတဲ.”
If your friend said ” နေလိုက်မယ် ပြီးရင်မယူဘူး ” to his ရည်းစား &
if his ရည်းစား agree it & having sex.
Then, this is their personal matters, I have to say nothing.
But, he didn’t said in advance ” နေလိုက်မယ် ပြီးရင်မယူဘူး ” to his ရည်းစား &
he pretended or promised her to marry her after having sex.
Then, we may say, he isaliar ( low caste/class ).
nigimi77 ရယ် ရှင့် အတွေးအခေါ်တွေက မဟာပုရိသ ၀ါဒပါလား ..
တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ ဓလေ့တွေတော့ မသိဘူးပေါ့ ..
မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု မှာတော့ ဟိုတုန်းက ပ၀ါတကမ်း လက်တလှမ်း နေခဲ့တာတွေ .. သုံးနှစ်သုံးမိုး ဆိုတာတွေ ရှိခဲ့တယ် .. မရှောင်နိုင်တဲ့ အမှောင်ကြား ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေလဲ ရှိမှာပါ ရှိခဲ့လို့လဲ စာ အနေနဲ့ ထွက်ပေါ်လာတာပေါ့ .. ဒါပေမယ့် .. ငြင်းဆန်ခြင်း ဆိုတာဟာ မိန်းမတွေရဲ့ လက်နက်ပါ .. သူက အနစ်နာဆုံး ဖြစ်ရမယ့် ခန္ဓာကိုယ် ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် .. သူတို့ မဖြစ်စေချင်တာကို လက်မခံတာ .. သဘာဝကို လွန်ဆန်တဲ့ မိန်းမ မဟုတ်ဘူး .. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တန်ဖိုးထားတာ ဖြစ်တယ် ..
ကိုယ့်သိက္ခာကို တန်ဖိုးထားတာဖြစ်တယ် .. လောကမှာ လူ ဆိုတာ အရှက်မရှိ အသက်ရှင်တာက ကောင်းသလား မကောင်းဖူးလား ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ .. (ရန်တွေ့တာ မဟုတ်ပေမယ့်) nigimi77 ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ရကိုယ်ယူကြေး ဆိုတာကို လက်ခံရင် လူမြင်ကွင်းမှာ လိင်ဆက်ဆံ ရဲလို့လား .. (ရိုင်းသွားရင် ခွင့်လွှတ်ပေးပါ)
Dear Moe Thida Soe,
I think nigimi77 is quoting (the saying of the friend of ရွှေဘိုသား)
So, nigimi77 အတွေးအခေါ်တွေ are not မဟာပုရိသ ၀ါဒ.
In my opinium,
“ဘ၀ဆိုတာ အလွန် ခက်ခဲနက်နဲပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့အဲဒီပေါင်ကြားထဲက မျိုးပွား အင်္ဂါကို ဘ၀ လို့ သတ်မှတ်နေကြတာလဲ”
ကျွန်တော် ဖတ်ဖူး တဲ့ ရွှေဥဒေါင်း ရဲ့ဝတ္ထုပါ အကြောင်း အရာ လေး တစ်ခု ကို ရှဲဦးမယ်နော် ။
ဝတ္ထု နာမည် ကို တော့ မမှတ်မိတော့ တာ ခွင့်လွှတ်ပါ ။
ဝတ္ထု ထဲ မှာ လူမျိုးခြား ၊ နိုင်ငံ ခြားသား နဲ့ လက်ထပ် တဲ့ မြန်မာ အမျိုးသမီး ကို ယောက်ျား တစ်ဦး က ကဲ့ရဲ့ တော့ နောက်တစ်ဦး က ဘာပြန်ပြောသလဲ ဆိုရင်… အဲဒါ မြန်မာမ အပြစ်မဟုတ်ဘူးဗျ… ။ သူ့ ခဗျာ သူ့ ကို ယူမယ့် မြန်မာ အမျိုးသား မှ မရှိတော့ တာ ၊ အဲဒီတော့ လက်ထပ်ယူမယ့်သူ ရှိတုန်း ရွေးချယ်ခွင့် မရှိပဲ လက်ခံ လိုက်ရတာပဲ ။ အေး..သူ့ ကို ယူမယ့် မြန်မာအမျိုးသား က ဘာလို့ မရှိသလဲ ဆိုရင်..အရင် သူ့ ရည်းစား က လက်ထပ်ပါမယ်လေး ဘာလေး ကတိတွေ ပေးပြီး ၊ လုပ်ချင်သလို လုပ် ပြီး မယူပဲ ပစ်သွားတဲ့ အခါ ၊ မြန်မာမ ခဗျာ သိက္ခာကျ ၊ နာမည် ပျက် ရတာမလား ။ ဒီတော့ သူ့ အနေ နဲ့ သူ့ ကို လက်ထပ်ပေါင်းသင်း ယူမယ့် လူမျိုးခြား ဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံခြားသား ဖြစ်ဖြစ် ယူတာ ဘာဆန်းသလဲ ။
ခုခေတ်ကတော့ ကိုရီးယားကားတွေ အကြည့်များပြီး အတုမယူသင့်တာတွေလည်း အတော်များများက အတုယူလာကြတယ်။ နောက် သူတို့ကို သူတို့ ခေတ်မီတယ်လို့ အပြောခံတာကိုလည်း ခံယူချင်ကြပုံရတယ်။ နောက် ကိုယ်ပိုင်အသိဥာဏ် အားနည်းလာကြတာလားဆိုတာလည်း မဝေခွဲ မပိုင်းခြားနိုင်တော့ပါဘူး။ လက်ခုပ်ဆိုတာလည်း နှစ်ဖက်တီးမှ မြည်ကြရတာဆိုတော့… ယောက်ျားလေးဘက်က အပြစ်မဆိုသာသလို မိန်းကလေးဘက်က ခွင့်ပြု မပြုသင့်ဆိုတဲ့ ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားဥာဏ်တွေနဲ့ အသိအမြင်တွေရှိနေဖို့ အတော့်ကို လိုအပ်ပါတယ်။
အဓိက ယောကျာ်းတွေကလည်း အတွေးအခေါ်မြင့်ဖို့လိုတယ်။ နဂျိမိ၇၇ ပြောသလို ဒီကိစ္စအတွက် အမြင်ကျဉ်းပြီး မိန်းမတွေအပေါ် နှိမ်ချင်တာမကောင်းပါဘူး။ ကိုယ်ကတော့ တွေ့ကရာနဲ့ အိပ်တတ်ပြီး ကိုယ့်ရည်းစားက ကိုယ့်ကို ယုံလို့ ပုံပေးတာကို အထင်သေးတဲ့ ယောကျာင်္းတွေ ရှိနေသမျှ မိန်းကလေးတွေကလည်း ဆင်ခြင်သင့်နေသေးတာပဲ။ ယောကျာင်္းတွေက ဒီကိစ္စမှာ မိန်းမတွေအပေါ် အမြင်ပြောင်းလာရင်တော့ ပိုပြီး အမြင်ကျယ်လို့ သဘောထားကြီးလာရင် မိန်းကလေးတွေလည်း သူတို့ရဲ့ စိတ်နဲ့ ခန္ဒာ လှုံ့ဆော်မှုနောက် လိုက်ရဲ ခံစားရဲမှာပေါ့။ အခုတော့ နာဖက်ကချည်း ဆိုတော့ သတိထားနိုင်မှ တန်ကာကျမယ်။
တော်သေးတာပေါ့ဗျာ .. ယောင်္ကျားလေးမဖတ်ရလို့ ပဲ.. ကိုယ့်ညီတော်နောင်တော်တွေ ၀င်မန်းမှတော့ ကျွန်တော်လဲမနေနိုင်တော့ဘူး နဲနဲတော့ အမြင်လေးဖွင့်သွားဦးမယ်..
အရှိကိုအရှိအတိုင်းလက်ခံတာအကောင်းဆုံးပဲလို့ ထင်ပါတယ်… အရင်ခောတ်ကိုအခုခေတ်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ယှဉ်ပြီး ကောင်းတယ်ပြောတတ်ကြသလိုပဲ… နောင်အနာဂတ်က လူတွေက လူတွေထက် ကျွန်တော်တို့ ဒီဘက်ခောတ်က ပိုစောင့်စည်းကောင်းစောင့်စည်းမှာပါ… ခေတ်တစ်ခုရဲ့သဘောတရားတွေလို့ ထင်ပါတယ်.. မှားတယ်မှန်းတယ်ပြောဖို့ မလွယ်ပါဘူး… ခောတ်စနစ်ရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်လာကြတဲ့ စိတ်ဓါတ်အပြောင်းအလဲကို ယောင်္ကျားမိန်းမ သုံးနှစ်သုံးမိုးလူပျိုလှည့်.. ကြမ်းတစ်ကျောထဲမထိုင်ရတဲ့ ခေတ်နဲ့ ယှဉ်ကြည့်ရင်တော့ လွန်သလိုဖြစ်နေပါမယ်… အဲဒီတော့ ယောင်္ကျားမိန်းမနေရာတကာမှာ ယှဉ်တွဲနေမှတော့ Hormone တွေရဲ့စေ့ဆော်ချက်နဲ့ ထိန်းသိမ်းမှုတွေ လျော့ရဲကုန်ပါတယ်.. အဲဒါကို မိန်းကလေးတွေရဲ့အားနည်းချက်လို့ မမြင်သင့်သလို… ယောင်္ကျားလေးတွေရဲ့အခွင့်အရေးယူတတ်မှု လို့ လဲမမြင်သင့်ဘူးထင်ပါတယ်…
အင်း.. ဒီလိုတင်တာတော့ကောင်းပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ယောက်ကျားလေးတိုင်းလဲ အဲလိုတော့ မဟုတ်ဘူးထင်တာပဲဗျ…. မိန်းကလေးတွေကလဲ သေချာပီဆိုမှ လိုက်လျောသင့်သလို ယောက်ကျားလေးတွေကလဲ စိတ်ထိန်းနိုင်ဖို့ လိုမယ်ထင်တာပဲနော်